UPDATE: Maxaa ka cusub khilaafka DF Somaliya iyo Ahlu Sunna & Wararkii ugu dambeeyay Xaaladda magaalooyinka… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Maxaa ka cusub khilaafka DF Somaliya iyo Ahlu Sunna & Wararkii...
UPDATE: Maxaa ka cusub khilaafka DF Somaliya iyo Ahlu Sunna & Wararkii ugu dambeeyay Xaaladda magaalooyinka…
Guriceel (Halqaran.com) – Wararka caawa naga soo gaaraya, magaalooyinka Dhuusamareeb, Guriceel iyo Matabaan ayaa sheegaya, in iminka ay xaaladdu tahay mid degan, kaddib dhaq-dhaqaaqyo ciidan oo 24 saac ugu dambeeyay halkaasi ka socday.
Ciidanka dowladda ayaa si buuxda gacanta ku haaya Matabaan iyo Guriceel, iyadoo maleeshiyaadkii Ahlu Sunna WalJamaaca ay dhinac uga baxeen.
Madaxa Xukuumadda Galmudug Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa warbaahinta qaar u sheegay in Ahlu sunna aysan ka bixin Magaalada Dhuusamareeb, islamarkaana ay wali jiraan kulamo u socda Ahlusunna iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha.
Kulamo looga hadlaayay Tilaabadda ay qaadayaan hoggaanka Ahlu sunna oo ka dhacay Xarunta INJi ayaa la isku mariwayay sida ay xaqiijiyeen ilo muhiim ah.
Sidoo kale, waxaa Khilaaf ka dhashay tilaabadda ay qaadayaan Ahlu sunna oo soo gala dhex galay Mas’uuliyiinta Ahlu sunna ee ku sugan Dhuusamareeb.
Ciidamada dowladda ayaa gacanta ku haya saldhiga booliska ee magaalada Guriceel, markii ay subixii Axadda maanta ay la wareegeen kadib markii xalay ay maleeshiyada Ahlu Sunna isaga baxeen.
Si kastaba, mas’uuliyiinta Ahlu Sunna ayaa dawladda federaalka ku eedaynayey inay ka baxday heshiiskii lala gaaray, iyadoo dhinaca kalena dawladdu ay sheegtay inaysan ka bixin.
Khilaafka dowladda Soomaaliya iyo Ahlu Sunna